Bogga - BOSLA | Gobolka
Gobolka Waqooyi Bari waxa uu ahaa, taariikhda la og yahay taariikhda la aqoonsan yahay, oo lagu gartaa socodka socdaalka. Socdaalku waxa uu ku sii batay laakiin gobolku wuxuu sameeyay sidoo kale marti-galayaasha muhaajiriinta, oo ay ku jiraan dadka qaxoontiga ah sida kuwa magangalyo doonka ah iyo qaxootiga.
Intaa waxaa dheer, Waqooyiga Afrika maanta ayaa saameeyey socdaal aan caadi ahayn. Inkastoo qaar muhaajiriin ah ay doonayaan in ay gaaraan Yurub marka ay bilaabayaan safarkooda, kuwa kale waxay soo gudbeen badda kadib markii ay soo mareen xaalado adag ama rabshad ama waxaa lagu qasbay ama si xoog leh uga qortey tahriibiyeyaasha si ay u sameeyaan isgoyska. Dadka soo galootiga ah ee ku nool gobalkan – ha ahaato rabitaanka joogitaanka muddada dheer ama ku meel-gaadhka – inta badan ku nool magaalooyin gaar ah oo loola jeedo xaafado. Joogitaankooda bulshooyinka marti geliya marwalba marwalba way adag tahay.
Dhamaan Dawladaha, oo ay ku jiraan shanta waddan ee Waqooyiga Afrika, waxay leeyihiin waajibaad iyo masuuliyad ah inay ixtiraamaan, ilaaliyaan oo ay gutaan xuquuqda aadanaha dhammaan kuwa ku yaal dhulkooda, muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn. Marka la eego xuriyadda madaxbanaan, waxaa habboon in la ogaado waajibaadka dawladaha sida waafaqsan sharciga caalamiga ah si loo caawiyo loona ilaaliyo muwaadiniinta ajnabiga ah iyada oo loo marayo bixinta adeegyada qunsuliyada. Dhibaatadani waxay tahay in dawlad goboleed looga baahan yahay ogolaanshaha dadka aan muwaadiniinta ahayn ee jooga xudduudahooda si ay u helaan saraakiisha qunsuliyada ee dalkooda. “Ilaalinta qunsuliyada iyo kaalmadu waa … wuxuu u muuqdaa mid caqli-gal ah oo ka mid ah waajibaadka Dawladda ee ilaalinta xuquuqda aadanaha ee muwaadiniinteeda, meel kasta oo laga yaabo inay degaan, iyo muhaajiriinta ku sugan dhulkooda iyadoon loo eegin xaaladda”.
Ururada caalamiga ah sida IOM waxay ku taageertaa Dowladaha waajibka saaran inay ilaaliyaan muwaadiniinta ajnabiga ah iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn ee degaankooda, sidoo kale waxay bixiyaan adeegyo toos ah. Ururada bulshada rayidka ah, iyo waxyaabo kale, mararka qaarkood waxay siiyaan adeegyo toos ah oo loo fidiyo muhaajiriinta. BOSLA, oo macneheedu yahay “ku-niyadsan” ee Carabiga, waxay u adeegtaa liis ay ku qoran yihiin macluumaadka ku saabsan adeegyada la heli karo kuwaas oo ka faa’iideysta xubnaha bulshada ee Waqooyiga Afrika ee ay bixiso xukuumadda ama cid kale. BOSLA waxaa laga helaa Morocco, Algeria, Tunisia, Liibiya iyo Masar.